नरेन्द्र माेदी बिश्वकाे कति औं धनिमा पर्छन् ? हेर्नुस् सम्पत्ति बिवरण यस्तो छ::देश र जनताप्रति समर्पित
नरेन्द्र माेदी बिश्वकाे कति औं धनिमा पर्छन् ? हेर्नुस् सम्पत्ति बिवरण यस्तो छ
प्राय राजनीतिज्ञहरु आफ्ना हरेक निजी बिषयमा स्पष्टताका साथ भन्दैन् भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार उत्तरप्रदेश राज्यको वनारसबाट लोकसभा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी दर्ता गरेका छन् । उम्मेद्वारी दर्तासँगै उनले आफ्नो सम्पति विवरण समेत सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री मोदीको कूल चल–अचल सम्पति २ करोड ५१ लाख ३६ हजार १ सय १९ रुपैयाँ देखिएको छ । जबकि सन् २०१४ मा उनको सम्पति १ करोड ६५ लाख ९१ हजार ५ सय ८२ रुपैयाँ थियो । प्रधानमन्त्री मोदीको गुँजरात राज्यको गान्धीनगरस्थित घरको मूल्य सन् २०१४ मा १ करोड मूल्याँकन भएको थियो भने अहिलेको सम्पति विवरणमा १ करोड १० लाख रुपैयाँ देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले उत्तरप्रदेशस्थित वणारसबाट लोकसभा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् । सो निर्वाचन क्षेत्रमा मे १९मा निर्वाचन हुँदैछ । भारतमा अहिले ५४३ लोकसभा सिटका लागि निर्वाचन जारी छ । ७ चरणमा हुने सो निर्वाचनाको अन्तिम नतिजा मे २३ मा सार्वजनिक हुँदैछ ।
नरेन्द्र मोदी फेरी नेपाल भ्रमणमा आउदै
मोदीको मेकअपमा मासिक १ करोड २८ लाख खर्च
मोदी र अक्षकुमारको जोक्स हानाहान हेर्नुस यस्तो रह्यो
यान उडान असफल भएपछि माेदीकाे सम्बाेधन यस्ताे छ
पाकिस्तानले भारत माथि भिषण हमला, इमरानले पुरै शक्ति लगाए, भारतको अवस्था समेत यस्तो हुने